Izindaba - Isici se-vmc650 cnc milling mahcine yethu
I-1.Ukusakaza: I-HT300 resin sand-resistant-resistant castings inokuminyana okuphezulu nokumelana okuhle nokugqokwa!Isihlalo sehhashi samukela isakhiwo sokulingisa esinezendlalelo ezimbili, futhi isakhiwo sekholomu esikhulu esimise okwe-A sibonisa ikhono lokusika eliqinile.
2. I-Spindle: yamukela i-Taiwan high-speed spindle 8000rpm, isakhiwo esilula nesihlangene, ukusebenza kahle okuphezulu, umsindo ophansi, ukudlidliza okuphansi nokunemba okuphezulu.
3.Isikulufu: Isikulufu somhlahlandlela sithatha isikulufu esingenisiwe se-JIS-C3 sokugaya i-nati eseluliwe ngaphambili ukuze sisuse i-backlash, ngemva kokwelashwa kokushisa, sinokuqina okuhle, ukumelana nokugqoka, futhi siqinisekisa ukunemba okuphezulu komsebenzi.
4. Ukushintsha kwamathuluzi okuzenzakalelayo: Uhlobo lwesigqoko saseTaiwan (imibese engu-16) umagazini wamathuluzi.Izinzuzo: ukugqokwa okuphansi, impilo ende, ukulungisa okulula, nezinga lokwehluleka eliphansi.
I-5.Ukuhlola: Yonke imishini yefekthri idlule ezinyathelweni zokuhlola zokuphazanyiswa kwe-laser, umshini wokukopisha, ukulinganisa kwangempela, njll.Qinisekisa ikhwalithi yokukhiqiza yomkhiqizo ngamunye.
X ukuhamba (mm) 650
Uhambo luka-Y (mm) 450
Z ukuhamba (mm) 500
Usayizi wethebula(L×W) (mm) 900×400
Umthwalo omkhulu (kg) 400
Iphakathi nendawo yokuphotha kuya kukholomu (mm) 575
Spindle ikhala etafuleni (mm) 100 ~ 600
Isikulufu sebhola 4012
X,Y,Z isivinini sokusika (mm/min) 1-6000
X,Y,Z isivinini esisheshayo (m/min) 15
Isivinini se-spindle(r/min) 50~8000
I-spindle taper I-BT40
I-spindle motor (kw) 5.5
T slot(mm)ubuningi×ububanzi×ibanga 5/18/75
Ukunemba (300mm) 0.005
Ukunemba kokuphindaphinda(300mm) 0.003
Usayizi (L×W×H)(m) 2.65*2.15*2.55